guta : Hwaseong
inotangwa : 1977
Musakanganwa kuti discuss The University of Suwon
The remakore rechi21 ndiro zera risingaperi pose makwikwi apo akanakisisa chete vachava
kuzivikanwa uye zvakanaka zvakaipa mumunda ose. Saka ndakachengeta mupfungwa kuti basa kana basa
pamusoro mumayunivhesiti muzera rino rinofanira kubereka zvakanakisisa dzevanhu zvinhu vanogona proficiently zvidikanwi nokuzadziswa yose mureza. To zvakare kuwedzera zvayo dzakawanda chinzvimbo, USW akagadza Sisterhood ukama 59 nomukurumbira mumayunivhesiti mune 17 nyika pose kusanganisira Brown Africa muna U.S.A., Nanjing University muna China, Teikyo University kuJapan uye Saint Petersburg State University muRussia, wo, isu chamakamisa Exchange zvirongwa uye vaiitawo zvedzidzo tsvakurudzo pamwe mumayunivhesiti izvi.
USW ave hwe- yabatanidza nyika kunyatsogona dzidzo nokuda 30 makore. dhonesheni Kwangu \_25,000,000,000 kuti bhezari Fund ndiro danho rokutanga chido changu kuita nepandinogona napo uchatamisa vaunganidza kugona uye zvinogona USW kupinda kuzadziswa vadzidzi’ kurota uye zvavanotarisira.
Munhu mazuva kukoreji ndiyo nguva apo mudzidzi kazhinji anokoshesa zvikuru netariro uye hope hwose. The yakakura hope, chikuru kuzadzika. funga kuti vadzidzi’ kushaya tariro uye zviroto iri anonzi kuti kushaya chido uye mukana zvaipiwa yunivhesiti zviremera. saka, USW achaita zvose zvinogoneka achiedza kupa vadzidzi zvayo zvakakwana kurudziro uye mukana kuti kukoshesa zvinangwa hwavo uye kubudirira…..
mweya USW kwakaita nheyo rinobva pakuvambwa dzidziso pamusoro Dangun (pakuvambwa baba Korea) inonzi 'Hongik'(kuna nemagariro evanhu). USW uyewo akabudirira kuti Confucian muuzivi Donggo Yi Jun-gyeong aiva mumwe mumiririri vashumiri vakachena-mumaoko muna Joseon youmambo, chacho mweya nheyo iri seizvi kuchengetedza, kururamisira uye mavambo ayo akatsanangura pazasi.
Maererano nemafungiro akadaro, izvozvo anokanda panguva kukudziridza matarenda yokuvimbika uye kuzvidzora uyo Chokwadi kukonzera kukura ehurumende uye kuzadziswa chete vanhu.
Department of Journalism & Misa Kukurukurirana
Department of Economics & mari
Division of Hotel & ushanyi
Department of Food & udyo
College of Art & patani
Graduate School of Hotel & ushanyi
Unoda discuss The University of Suwon ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo